Waa tan sida loo helo badhka kaamil ah - Afrikhepri Fondation
0 / 5 Fiiro gaar ah: 3.56
Firfircoonidu waxay la socotaa mugga quruxda badan, dhammaan dumarka (iyo ragga!) Riyada. Haddii dhab ahaantii ay jirto astaamo hiddaha ah oo leh ama haysan, daboolka quruxda badan, waxaan dhammaanteen heli karnaa qurux badan oo leh dadaal badan ama yar, waqti ... iyo lacag.
Steatopygia: genetics ee barida "Afrikaanka".
Afar arrimood oo hidde ah ayaa ciyaaraya marka ay tixraacayaan qaababka kala duwan ee haweenka Afrikanka ah iyo kuwa Afriga ah.
Qaabka lafta: qaabeynta qaabka lafdhabarta lakabka iyo qaabka uu kudhaqaaqayo qaabka tooska ah ee aan lahayn xariiq toosan. Haddii aad nasiib u leedahay inaad leedahay kore wanaagsan, waxaad si isdaba joog ah u yeelan doontaa kalabadh aad u qurux badan.
Dhismaha muruqyada (weyn, dhexdhexaad ah iyo gluteus yaryar): Fiber muruqa ayaa ka badan kuwa Afrikaanka ah, kaas oo u oggolaan doona mugga weyn ee muruqa.
Dhismaha nudaha adipose: Qaar ka mid ah kooxaha African qowmiyadeed (Bushman, Hottentots Pygmgées, Khoisan, Hadza ...) waxaa hiddo lagu gartaa steatopygia a fahmayaan. Raaskalkani wuxuu ku yaryahay baruurta iyo bawdada waa tamar tamareed oo awood u siinaysa inay ku noolaadaan waqtiyada macluusha. Dabeecadaani waxay kaloo noqon kartaa mid dhaqameed iyo kooxo qowmiyadeed (gaar ahaan Niger) hangandi(xoog-quudinta) haweenka ujeedooyin bulsheed iyo kalmo.
Dhismaha haraggaMaqaarka madow wuxuu leeyahay unug dermer ah oo ka baxsan maqaarka Caucasian. Waxaa jira fibroblasts dheeri ah oo ka mid ah kolajka iyo elastin. Tani waxay keentaa adkeyn weyn, maqaarka midabka leh.
Jawaabta warshadaynta qurxinta.
Wadankan Yurub, "daboolisyo gaar ah" ayaa waxay ujeedadoodu tahay in la yareeyo cellulite (xoqidda) iyo hagaajinta tayada maqaarka (dabka). Dhibaatooyinka maaddooyinka firfircooni waxaa lagu kordhin karaa farsamooyinka manhajka (massage) ama farsamo (endermology, electrostimulation).
Afrika (laakiin sidoo kale Brazil ama Mareykanka), xaaladdu way ka duwan tahay. Ma dooneyno in aan dhalaalno boogaha. Taas bedelkeeda, waxaan rabnaa inaan aragno iyaga oo barara! Qaadista kormeerka badiyaa waxay u jeedaan caqabadaha qaarkood. Kroos Bora-Bora, Botcho Cream ("badh badh" ee Abidjan), Kiniinada Yodi (Koonfur Afrika), daboolka saliidda ee codka beerka ee la xidhiidha nafaqada qani ah ee lipids, geedaha Brazil (maca), Kiniinnada ka hortagga uurka ... Sidaas darteed waxyaabo badan oo ka kooban halbeeg yar oo loo maleynayo inay kordhinayso mugga adipose.
Cunsuriyadaha u digtoonow!
Afrika dhexdeeda, waxqabadyada qaarkood - kuwaas oo waxtarkooda aan marnaba la xaqiijin - waa caado laakiin khatar u ah caafimaadka.
kaniiniyada Qaar ka mid ah (nooc dhalashada) bararin barida kicin qanjirka pituitary sii daayo estrogen ka dhigi u suurto jirkaaga in uu kaydiyo baruur in badhida iyo miskaha ah (iyo / ama meelo kale!) Si aad u koraan. Dhibaatooyinka ayaa soo bixi kara: burooyinka naasaha, xakameynta wareegga caadada, xanuunka niyadda ...
Si deg deg ah ka badbadinin dabada, iyagoo laabta ama miskaha, qaar ka mid ah tag si aad isugu durto dose of Deca Durabolin, an wax soo saarka steroid dhiska caan ah oo leh bodybuilders in kor horumarinta muruqyada Salalka ah, oo ay weheliso haynta biyaha ee unugyada. Laakiin saameynada daawadu waa badan yihiin: hypertension, madax xanuun, sanka dhiigga, finanka ...
farsamo kale si buuxda aan macquul ahayn iyo wax garad ahayn wax sal sayniska: Maggi saaraayo fuud geliyo anally for raasamaal eedeeyay xaydha barida. Waxyaabaha cusbada badan ee cusbada ayaa ah mid aad u xoqan xuubka dheecaanka waxayna keenaysaa infekshinada dhibaatooyinka dumarka naftooda khatar gelin kara.
Sport: qurux badan iyo isfaham.
Doorashada caafimaadka ugu fiican iyo kuwa ugu jaban ayaa wali ah in la galo isboortiga. Duufaantu waxay leedahay saddex muruq oo: weyn, dhexdhexaad iyo baraf yar. Muruqyada maskaxda ayaa ka mid ah kuwa ugu weyn ee jirka bini'aadamka. Dhammaantood waxaa lagu bartilmaameedsan karaa siyaabo kala duwan oo isboorti ah waxayna si dhakhso ah u helaan mugga Heerka A ee kalfadhi oo todobaadle ah 5 20 daqiiqo, wadnaha talantaalli ah iyo tababar miisaanka, waa in aad si deg deg ah u aragno Metamorphosis baadkiisa. Waa kuwan qaar ka mid ah layliyada ugu waxtar badan.
Goobta istaagida: fureyaasha hore, squats
Xayawaanka 4: cirridka iyo dheellitirka dhabta, eyga yar
Dhinaca dhabta ah: buundada
Laabashada labada dhinac: lugta kor u qaadday
Qummanka-qaadidda iyo gelitaanka: Qalitaanka qurxinta ee qanjidhada.
Sida ku xusan maqaalkeena isbedelada weyn ee 2016Afrika waa dhul dalxiis oo loogu talagalay dalxiiska dalxiiska ee qiimaha jaban. Rugo badan oo kalkaaliyeyaasha lagu daaweeyo waxay u oggolaanayaan in ay isku daraan howlaha qalliinka iyo fasaxyada. Tan iyo 2 sano, kororka ugu badan marka la eego hawlgalka waa mugga sii kordhaya ee barida (+ 86% sanadkiiba ee USA, + ​​780% ee Koonfur Afrika!). Waxaa soo raaca xiddigaha sida Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Beyonce, Nicki Minaj, kumanaan dumar ah ayaa isticmaalaya qaliinkan. Ma aha oo kaliya macaamiil reer galbeed ah, laakiin, haweenka madow ee fasalka dhexe. Qalab qaali ah (dhowr kun oo euros) iyo, sida qalliin kasta oo qalliin ah, waxay sababi kartaa dhibaatooyinka post-operative (xanuunka, diidmada, calaamadinta ...).
Lipostructure ee badhida waxaa lagu sameeyaa laba weji (Aspirate) (tusaale ahaan bowdada) ka dibna ku darsada dufankaaga dufanka si loo saxo mugga iyo qaabka. Daawooyinka waa la soo celin karaa.
Ku rakibidda qalabka silikoonta waxay u oggolaaneysaa koror xoog leh ee mugga iyo qaabka badhida.
Qalabka quruxda badan.
Kaalay, kuwa doonaya in ay yareeyaan wax yar ... In yar oo soo galaan iyo natiijo deg deg ah iyada oo aan la silcin iyo dadaal, xijaabka rinjiga waa xal. Waxaan dooran karnaa dhabarka danbe ama pantyhose leh farsamooyin isku dhafan kuwaas oo keeni kara dusha sare ee badhida. Qeybta casriga ah ee foosha (faux-cul) ayaa aad loogu jecel yahay Faransiiska qarnigii sagaalaad.
Maqaalkan iyo waxyaabo kaloo badan oo ku saabsan www.panafricanbeauty.com
Runtu waa boqortooyo la'aanteed
Dhalinyaradii Dhexe, Macallimiintu waxay u soo jiidanayaan Yurub
Qarsoodi ah IYAS, filim by Cyrill Noyalet